ကြားပါစေသား ကြားစေသား ။
လောကတို့ ဘ၀တို့ကို မင်းတွေ ၊ ခင်ဗျားတွေ ပြောကြကြေးဆိုရင် ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တည်နေဆဲ ငါ့ကို သုညပြန်ပေးပါ ။ ငါ့ကို သုညပေးပါ ။ နောက်ဆုံးတော့လည်း သံသရာ လည်ဦးမှာပါ ။ ကြည့်ခဲ့ ၊ မြင်ခဲ့ ၊ ကြားခဲ့ ၊ နားထောင်ခဲ့ ၊ သင်ကြားခဲ့ ၊ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အရာအားလုံး ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံး …..
အ ဘာ ဘား အဘား ။
စာကြွင်း ။ စာတွေ လိုက်ဖတ်ရတာ ပျော်တယ် ခင်ဗျာ ။
Posted by naing at 11:40 PM4comments
Labels: Expression of mind
မအားလို့ ခင်ဗျ ။
Posted by naing at 6:29 PM2comments
သိပ် သနားစရာကောင်းတာပဲ အမေ ။ သူတို့က ထင်ကြတယ် ။ ကျွန်တော် က လူလားမြောက်တဲ့လူသားတစ်ယောက် ။ ဘာလို့ပါလိမ့် ။ အမေပြောတဲ့ ခေါင်းမီးတောက်နေပြီ ၊ ရင်ပူတယ် ၊ ရေတွင်းထဲက ငွေထွက်တာမဟုတ်ဘူး ။ ဒီလိုပြောတာတွေ ကြားနေကျ ကျွန်တော် ။ ကျွန်တော် ဘာပြောရမလဲ အမေ ။ သိပ် သနားတာပဲ ။ သူတပါးကို နှိမ်တဲ့ စိတ်တွေ ၀င်နေပြီ ။ ကျွန်တော် လူလားမြောက်ကရောလား အမေ ။ နှိုင်းယှဉ်သိမှုကနေ ဖြည့်စွက်တွေးတောခြင်းပါ အမေ ။ ကျွန်တော် မှားတာပေါ့ ။ နားမလည်တာကို နားလည်သလိုလို နားလည်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာပါ ။ လက်ညှိုးထိုးတာတောင် မရဲတော့ဘူး ။ ဂဏန်းသင်္ချာတောင် အတော်မေ့နေပြီ အမေ ။ တခါတခါတော့ လွမ်းတာပေါ့ ။ အမေ ကျွေးတဲ့ မုန်တီသုတ် ။ အန်ထွက်အောင် စားမယ့် အစ်ကိုကြီးကိုလည်း သတိရမိပါရဲ့။ အကြော်နဲ့ပဲ စားမယ် လုပ်တဲ့ အငယ်ကောင်လည်း ဘာတွေလုပ်နေပါလိမ့် ။ ကိုကြီးက ပြောမှာပေါ့ ။ မင်း ကြပ်ကြပ်သတိထား ။ လူကြီးကပြောရင် နားမထောင်ချင်ဘူး ။ အတွန့် တက် ဆင်ခြေလေးတွေ ပေးလိုက်ရမှ ။ အဖေတို့ ဘာသိလို့လည်း ။ အမေကလည်း ဗျာ ။ အင်း ပြောရင်းတောင် သတ္တ၀ါတွေ သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံပေါ့ အမေရယ် ။ တခြား စဉ်းစားမနေပါနဲ့ ။ နားနားနေနေနဲ့ ဘုရား ၊ တရားသာ အာရုံပြုနေပေါ့ အမေရာ ။ အမြဲတမ်းဆိုတာကြီးကို အမေ့ကို ပြောရင်လည်း … သားရယ် … ။
အဖေ့လည်း ဂရုစိုက်ရ ။ သားတွေလည်း စိတ်မချဆိုတာမျိုး အမေလည်း ပင်ပန်းနေရောပေါ့ ။ ရှက်ပါတယ် အမေရယ် ။ စကားတွေပဲ ပြောနိုင်တာ ။ လက်တွေ ခြေထောက်တွေက ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်နေမှန်းမသိဘူး ။ ကျွန်တော် ဘာလဲ လို့များ အမေ့မေးရင် အမေ မျက်ရည်ဝေ့လာတော့မှာပဲ ။ ဘယ်အချိန် ၊ ဘယ်နေရာ ချွင်းချက်တွေ အမေ မပေးခဲ့ဘူး ။ သတိ ၊ ၀ီရိယတွေနဲ့ ကျန်းမာအောင်နေ။ ကြိုးစား ၊ မပျင်းနဲ့ ။ *ပျင်းရင် ဖျင်းတတ်တယ် သား* ။ *ဟုတ် ၊ အမေ* ။
လွမ်းတိုင်းသာ တမ်းရလျှင် …
လွမ်းမြဲ အစွဲကို တတ်သလောက်
ရှိမခိုးရတာ ကြာပါပကောလား ။
Posted by naing at 8:00 PM4comments
Mother MOTHER mother'
အမေ အမေ အမေ့
Posted by naing at 2:23 AM0comments
အမြင်ချင်းကွာမယ် ထင်ပါတယ် ။
ထင်တာလဲ ကွာမှာပါ ။
Posted by naing at 7:48 PM2comments
Yam ( 1998 - 99 )
မင်းနဲ့ ခင်မင်ခွင့်ရတဲ့ ပထမဆုံးနေ့ကို မမှတ်မိဘူး ။ ပထမဆုံးရဲ့ အရသာကို အဲဒီအချိန်မှာ စတင်ခံစား တတ်ခဲ့ရတယ် ။ မင်းရဲ့ အရောင်အဆင်း တင့်တယ်လှပမှုကို မဖွဲ့နွဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ မင်းရဲ့ ပူလောင်မှုက ရင်ကို အေးချမ်းစေခဲ့တယ် ။ မင်းရဲ့ အပြင်အဆင် ခမ်းနားမှုတွေ တန်ဖိုးတက်လာမယ် ဆိုတာလည်း သတိမပြု ဖြစ်ခဲ့ဘူး ။
အဲဒီအချိန်က မင်းကို သပ်ရပ်မှုအနည်းအကျဉ်းဖြင့် ခင်းကျင်းပြသခဲ့တယ် ။ မှတ်မိတယ် ။ ပ၀ါစက အရောင်မတူ ။ အစွန်းနှစ်ဖက်က လွတ်တာလည်း ရှိခဲ့တယ် ။ နေရာထိုင်ခင်း ကျဉ်းကြပ်နေလို့လည်း ဖြစ်မယ် ။ လွမ်းမိတယ် ဟိုတုန်းက မန်းလေးညရေ လို့ အဆိုတော် အငဲ သုံးခွေဆက် လွမ်းသလို လွမ်းမိခဲ့ပါရဲ့ ။
မင်းကို စွဲမက်စေလိမ့်မယ်။ တခါတရံ မင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေနှင့်အတူ ထပ်တူညီကျတဲ့ ပေးဆပ်ခြင်းတွေ လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ခံစားချက်ပြင်းပြင်းတွေ မင်းနဲ့အတူ အရည်ဖျော်ပစ်နိုင်လိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့ ဘေးဥပဒ်တွေ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ခံစားရလိမ့်မယ်။ အဲဒီအကြောင်းအရာတွေကို တွေ့ဆုံပေးသူက သတိပေးမသွားခဲ့ဘူး ။
မင်း ခွင့်လွှတ်တန်ကောင်းပါရဲ့။ ဖန်တီးမှုတွေ သိပ်ကြီးကျယ်တဲ့ ခေတ်က စိုးမိုးအနိုင်ယူခဲ့တယ်။ အရောင်အဆင်း ပြောင်းခဲ့တယ်။ အေးမြမှုတွေ နဲ့ ဇွတ်မှိတ် မြိုသိပ်ခဲ့ရတယ်။ အစိုင်အခဲကို ထုမခွဲနိုင်သလိုပေါ့ ။ အရောအနှောတွေ မြောက်မြားစွာနဲ့ မင်းကို တွယ်တာခဲ့တယ်။ မင်း ကဏ္ဍက ရေးကြီးခွင်ကျယ် ခပ်စွာစွာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
မင်းကို မေ့ပစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အမျိုးအနွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလို့ ခေါင်းစဉ်ပေးရင် စိတ်မဆိုးဘူး ထင်တယ်ကွာ။ မင်းနဲ့တူတဲ့ ပုံစံ၊အရည်အချင်း၊အရောင်အဆင်း ။ ဒီအရာတွေနောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ခဲ့မိတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပါကွာ။ အချိန်၊နေရာ၊ရာသီဉတု၊စိတ်၊အာဟာရ ဒါတွေလည်း ပါကောင်းပါလိမ့်မယ်။
သတင်းတွေကြားတယ်။ မင်းဘ၀နဲ့ မင်း အခြေတကျ ရပ်တည်နေပြီတဲ့။ တချို့နေရာတွေမှာ အရည်အချင်း မီတယ်၊ တချို့အချိန်မှာ မင်းက အသုံးမကျစွာ ခပ်နွမ်းနွမ်း ဖုန်တွေနဲ့ ရှိနေတယ်။ ကမ္ဘာချီ လွမ်းရအောင် မင်းကလည်း စွမ်းခဲ့တာကိုး။ ကမ္ဘာကလည်း သင်္ကေတတွေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာပဲ။ မင်းပျော်နေမှာပါ ။
ကိုးရှစ် ကိုးကိုး ပညာသင်နှစ်က ယမ်ယမ်ရေ …
Title word Yan. Yam ရသာမှန် ယမ်ယမ် ။ အမှန်ပြင်ပေးသူ E m0t i o n
Posted by naing at 12:46 PM2comments
ပုံလှလှ ၊ လှုပ်လှုပ်လေးတွေ ရမယ် ။
ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်တင်ဆက်ထားသော ဆိုဒ်
ယူဆဂိ၊ဓ မ္မ စ ကား နေ့ တိုင်း ကြားက၊ စိတ် ထား ဖွေး လက် သိ ဥာဏ် ထက် ၏
မေးလ်အစောင်ရေ အများဆုံးသိမ်းပေးနေသော နေရာ
မြန်မာလို ရေးချင်ကြသူများနှင့် ရေးသားနေကြသူများ
Sharing Books စာအုပ်ဆိုဒ်
As You Like ဈေးဝယ်ရအောင်
Blog Archive အတိတ် ကို ဖတ်နိုင်ရန်
I move my world. A little shake!
Thankalot! I hope you are nice @Home.